रासनमा घो,टाला र जवानको टी,एडी,ए का,टेर यसरी मो,टाउछन् प्रह,रीका हाकिमहरु – Satya Samachar
दिपक दिपा र केहि टिम मलाइ गिराउन लागीपरेको धेरै बर्ष भैसक्यो , दर्शकले अहिले मात्र थाहा पाउनु भयो : राजेश हमालको भावुक अन्तरवार्ता ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )
अन्ततः गिरीलाई कार,बाही गर्ने नि,र्णय
सुस्मिताकी आमालाई ध$म्की आएको हो ? नन्दे जवाईले किन बाचा गरे सुस्मीताकी आमा संग ? (हेर्नुहोस भिडियो)
भर्खरै हातहतियारसहित १५ गाडी भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल छिरे
अछाम घट,ना : बुहारी कु,ट्ने ससुरा, भिडि,यो बनाउँने महिलाकै श्री,मान (हेनुहोस् भि,डीयो)
मुख्य पृष्ठ /समाचार/रासनमा घो,टाला र जवानको टी,एडी,ए का,टेर यसरी मो,टाउछन् प्रह,रीका हाकिमहरु
रासनमा घो,टाला र जवानको टी,एडी,ए का,टेर यसरी मो,टाउछन् प्रह,रीका हाकिमहरु
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरुवा हुने सिपाही हवल्दारको नाममा टीएडीए निकालेर खाने तत्कालीन काभ्रे जिल्लाका एसपी (हाल एसएसपी) पूजा सिंहको अनुसन्धान सुरु गरेको लामो समय बितिसकेको छ । २०७१ भदौमा काभ्रे जिल्लाको प्रहरी प्रमुखमा सरुवा भएकी पूजा सिंह र लेखापाल धु्रव गौतमले सरुवा हुने प्रहरीका परिवारको टीएडीए खाएको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।
प्रहरीका परिवारले पाउनुपर्ने टीएडीए खाएको उजुरीपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले लेखापाल गौतमलाई लेखापालबाट हटाएको थियो । तर ५ बर्षसम्म पनि टीएडीए खाने मुख्य दोषी कमाण्डर पूजा सिंहको अनुसन्धान टुंगिन सकेको छैन । र, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छैन । बरु यसबीचमा सिपाहीको टीएडीए खाने सिंह एसएसपी बढुवा भइसकेकी छन् । उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत छन् ।
५ बर्ष अनुसन्धानमै बित्यो ?
२०७२ असोज २२ देखि २०७३ माघ २३ सम्म सिन्धुलीको दुधौली तालिम केन्द्रको समादेशक बनेका पूर्वडीआइजी महेशविक्रम शाहबिरुद्ध तालिमे जवानको तलब हिनामिनाको आरोपमा अख्तियारले २०७६ फागुन २० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । शाहसँग सिपाहीको रासनमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै ३३ लाख ३८ हजार ८४ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । तर पूजा सिंहले २०७१ मै सिपाही हवल्दारको टीएडीए कीर्ते गरी खाएकोबारेमा प्रमाणसहित उजुरी परेर अनुसन्धान गरिसकेपछि मुद्दा दायर गरेको छैन ।
टीएडीए खाने पूजा सिंहको उजुरीमा अख्तियारले चासो राखेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय अन्तर्गत प्रहरी निरीक्षणालयका एक एसएसपीको कमाण्डमा छानबिन टोली गठन गरेको थियो । छानबिन टोलीले अध्ययनपछि भ्रष्टाचार गरेको तथ्यसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई बुझाएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गरी टीएडीए खाएकै प्रतिवेदन दिएपछि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छैन । सरुवा हुने तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई मात्र होइन, उनीहरुका परिवारलाई समेत राज्यले टीएडीए सुविधा दिने गरेको छ । तर कतिपय इन्चार्जले सरुवा भएर जानेहरुको टीएडीए दिए पनि उनीहरुका परिवारको नदिई कीर्ते गरेर खाने गरेको पाइएको छ । सरुवा हुने प्रहरीले बाबुआमा, श्रीमती र २ सन्तानको टीएडीए पाउँछन् ।
हाल संघीय प्रहरी कार्यालय पोखरामा एसपी रहेकी सिंह र लेखापाल गौतम मिलेर टीएडीए खाएको बिषयमा अख्तियारले त्यतिबेला कार्यरत १ सय ५० जनासँग बयान लिएको थियो । सरुवा हुने तल्लो दर्जाका सिपाही हवल्दारदेखि कनिष्ट अधिकृतका परिवारको टीएडीए तत्कालीन एसपी सिंह र लेखापाल गौतमले खाएको उजुरी परेको थियो ।
मुद्दा नचलाउन पूजा दम्पतीको चलखेल
अख्तियारले डीआइजी शाहलाई मुद्दा दायर गरेपछि टीएडीए प्रकरणमा पनि मुद्दा दायर हुने अपेक्षा गरिएको थियो । मुद्दा दायर हुने संभावना देखेपछि पूजा सिंह र उनका पति प्राविधिक डीआइजी लोकेस सिंह अख्तियार प्रमुखसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाहरुको खोजीमा लागे । लोकेस सिंहले क्याप्टेन रामेश्वर थापालाई चिनेका थिए । अख्तियार प्रमुखका छोरा उनको अफिसमा काम गर्ने भएकाले लोकेस र पूजा उनलाई भेट्न गए । र, अख्तियारमा मुद्दा नचलाइदिन र उजुरी तामेलीमा हालिदिने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरेका थिए । जुन अनुरोधका आधारमा उनीमाथि मुद्दा दायर हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । अख्तियार स्रोतका अनुसार पूजा सिंहको उजुरी अहिले तामेलीमा पनि हालिएको छैन र मुद्दा चलाउनका लागि अगाडि पनि बढाइएको छैन । नेपालफेसबाट
भारतीय मिडिया भन्न थाले” “मोदी सरकार नेपालीहरुलाई भारतबाट लखेट
अ,लप,त्र मान्छे फिर्ता ल्याउन नसक्ने सरकारले माटो फिर्ता ल्याउँछ भन्ने रत्तिभर वि,श्वास छैनः गगन थापा
थप दुई जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, नेपालमा संक्रमितको संख्या ४७ पुग्यो
गायक सपुतको कोरोना कोषमा दुई लाख सहयोग
अछाममा आइसोलेसनमा भएकी एक महिलाको मृ त्यु